15 May Qolaba cayn u ah.
Maalinta 15 may waa milin xambaarsan taariikho kala duwan gaar ahaan Somalia falastiin iyo Israil.
Aynu kuhoreynee 15 may waa maalintii lagu dhawaaqay dawlada yahuuda. Kadib. markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee aduunku dadka yahuudu waxay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan bariga dhexe dhulkaas oo ay kaqexeen waqti hore inta joogtana waxay hootagi jireen dadka carabta ah.
Hadaba markii ay taariikhdu ahayd 15 may 1948kii waxaa si rasmi loogu dhawaaqay dawlada yahuuda caaimadeeduna tahay Qudus ama jurislam inkastoo ay si kumeelgaar ah ugu shaqayso tal-abib, 11 daqiiqo kadib markii lagu dhawaaqay dalda yahuuda waxaa dawladii ugu horeysay ee aqoonsata noqotay dawlada maraykanka. Dhisitaanka dawlad ay yahuudu yeelato waxay farxad iyo rayn-rayn u ahayd dhammaan dadka yahuuda meelkasta oo ay caalamka kajoogaan. Laakiin waxay murugo iyo tiiraanyo u hayd shacabka reer falastiin iyo carabta oo dhan kuwaas dhulkoodi iyo guryohoodiba ay israil lawareegtay taas oo ay usii dheerayd gumaad iyo barakicin ilaa manta ay kujiraan.
15 may qolaba waa u cayne bal aan eegno soomaaliyana.
15 may 1943kii waxaa magaalada muqdisho looga dhawaaqay ururkii dhalinyarada soomaaliyeed ee SYL inkastoo magucu markii hore ahaa S Y C. S Y L waxa uu ahaa urur ay aas aaseen 13 dhalinyaro soomaaliyeed oo uu madax u ahaa halyeygii soomaaliyeed ahaana aas aasihii SYL waakee ninkaasi waa geesigii YAASIIN XAAJI CUSMAAN SHARMA’ARKE, kuwaasoo kadamqaday dhibaatada gumaystuhu kuhayo shacabka soomaaliyeed, SYL waxay geed dheer iyo gaabanba ufuuleen sidii gumaysiga uga saari lahaayeen dalkooda una midanlaahaayeen shacabka soomaaliyeed meelkasta ee uu joogo. Haddaba 17 sano oo ay halgan adag kujireen SYL waxay kuguulaysteen inay gumaystayaashii kasifeeyaan dhulka jamhuuriyadda soomaaliya.
Hadaba 48 sano kadib guushii ay shacabka soomaaliyeed usoo hooyeen halagamayaashii SYL intee kuxoornay haddaan nahay shacabka soomaaliyeed. Waxaa murugo leh 48 sano kadib guushii SYL noosoo hooyeen inay sifudud gacantayada uga baxday ayadoo aysan jirin cid dibada nooga soo duushay. Hadaba dhalinyarada soomaaliyeedey ma garanaysaan cidda naga faramaroojisay guushii ay nagaarsiiyeen aabbayaasheen SYL jawaabtu waa haa waana qabyaalad iyo qurun.
Maxaa lagudboon dhalinyarada soomaaliyeed?
Dhalinyarada soomaaliyeedey waxaad kazoo daasheen qabyaalad iyo qurun mustaqbalkii wadankiini iyo kiiniiba waa baaba’ay dalkii waa burburay dadkii land land ayuu ukala tagay ee is daba qabta dadkiinana isku soo celiya dhagahana ha udhinina land land-ka ay meelaha lataag taaganyihiin tabcanayaasha tikreegu ee dadkiinna iyo dadkiinba marka dib umideeya.